Kacha mma PLA Cup & mkpuchi Manufacturer na Factory | Huanna
Anyị na ngwaahịa na-ukwuu kwetara na a pụrụ ịdabere na site na ọrụ na ike mezuo agbanwe agbanwe agbanwe ego na-elekọta mmadụ chọrọ maka ODM Factory China Design Biodegradable Disposable Cold Eco Coffee Beverage PLA 6oz 8oz Cups Manufacturer, We warmly welcome all point of view ase si n'ụlọ gị na mba ọzọ na-arụkọ ọrụ na anyị, na-atụ anya gị akwụkwọ ozi.
ODM Factory China Cup na Disposable price, Business nkà ihe ọmụma: Were ahịa dị ka Center, na-àgwà dị ka ndụ, iguzosi ike n'ezi ihe, ibu ọrụ, na-elekwasị anya, innovation.We na-aga na-enye ọkachamara, àgwà na nloghachi maka ntụkwasị obi nke ndị ahịa, na ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa zuru ụwa ọnụ, ndị ọrụ anyị niile ga-arụkọ ọrụ ọnụ ma gaa n'ihu ọnụ.
Ngwaahịa ndị China China China White PVC Granule, PVC Granule, N'ihi nkwụsi ike nke ihe anyị, nnyefe oge na ọrụ anyị ji obi anyị niile, anyị nwere ike ree ahịa anyị ọ bụghị naanị n'ahịa ụlọ, kamakwa ebupụ ya na mba na mpaghara, gụnyere Middle East, Asia, Europe na obodo na mpaghara ndị ọzọ. N'otu oge, anyị na-ibido OEM na ODM iwu. Anyị ga-eme ike anyị niile iji jeere ụlọ ọrụ gị ozi, wee mebe mmekọrịta gị na gị na nke ọma.
Nke gara aga: Osisi ịkpụ osisi
Iberibe Plastic iko
Iberibe Plastic iko na mkpuchi
Clear Plastic iko na mkpuchi
Compostable Plastic iko
Disposable Plastic iko na mkpuchi